Internet Essentials: Xarunta Waxbarashada
Waxaad ka heshaa astaamo iyo Lacag Caddaana dheeshaan maaweelada leh inta aad baranayso ku-sugnaanta onlaynka badqabka leh.
Socdaal Goobeed Waajiba
Waxbarashada Soosaarista iyo Saamaynta Bulshada Comcast waxay ardayda ku soo dhaweynayaan Socdaala Goobeed Waajiba oo muuqaallada-gadaashooda si ay waayo-arag ugu noqdaan taariikhda iyo quruxda caasimad qarameed-keenna -- oo ay jidka ku wehelinayaan hagayaasha kormeerka martida gaar ahaaneed
YouTube Badqab leh
Wax walba oo ku jira Youtub-ka maahan ciyaaro iyo madadaalo Cunggaaga ka caawi badqabidda.
Waxaad aaggaaga ka goobtaa fasallo ka la jaada si aad u sii wadato waxabarasho tireed-kaagii.
Mawduucyada Caanka ee ugu Badan
Casharrada ugu Cusub
Askar-Hore[ Hagitaanka Ku-Gooshitaanka Mareegta
Casharrada loogu talagalay askartii hore si loo horumariyo xirfado tireedka mareegta.
Magaalada U.S.: Socdaal Goobeed Waajiba
Ilaha laga faa'iidi karo ee sharraxaya tirokoobku wuxuu yahay iyo sida adiga iyo bulshadaadaba kaqeybgalku faa'iido ugu leeyahay.
Tusaha Waayeelka ee Kugooshka Mareegta
Casharro si gaara loogu talagalay waayeelka hadda bilaabaaya intarneedka.
Ilo waxtara iyo aalado tireed kale oo ku saabsan sidii aad onlaynka ugu maamuli lahayd dhaqalahaaga.
Baro sida uu intarneedku aalad waxtara oo xagga waxbarashada heer walba kuugu noqon karo.
Baro afgaradeynta oo hoos ilaa kora.
Goobitaanka Barnaamijyada kaalmaynta Askar Hore
Eeg siyaalo gaara oo aad u adeegsan karto intarneedka si aad u hesho ilaha ka suurtogalka bulshadaada.
Cashar ku saabsan sidaad uGu xiriirin lahayd aaladdaada WiFi-ga o aad xeyndaabyada dadweynaha ugu adeegsan lahayd WiFi-ga.
Kaarkee baa la isticmaalaayaa: debid mise karadhid
Baro markay ugu fiican tahay inaad kaarka karadhidka wax ku gadato intaad isticmaali lahayd karaka debidka.
Sida ay u shaqeyso, iyo sida naftaada aad iyada uga ilaalin karto.
Ammaanka & Badbaadada Onlaynka
Tibaaxo degdeg oo ku saabsan sida loogu dhawro xog qofeedka mareegta oo badqab iyo ammaan leh.
Wax walba oo aad u baahan doonto si aad u bilawdo.
Waxyaalaha Kowaad waa Kowaad
Ku cusub intarneedka? Halkaan waa meel ku fiican in laga bilaabo. Halkaan, waxaad ka heli doontaa dulmar ku saabsan sidaad ugu xirmayso oo aad ugu dhex gooshayso intarneedka-oo ay ku jiraan tibaaxo sida loo adeegsado aaladaha raadinta ku saabsan, salalka warbaahin bulsheedka, iyo iimayl.
Hagaha Qalabyada Gadashada
Ilaha kaa caawinaaya sidii aad u tixgelin lahayd dhammaan khiyaarradaada.
Baro sidii aad ugu gooshi lahayd Kombuyuutar-kaaga
Lama-huraannada aad u baahan doonto inaad bilawdo.
U baro isticmaalka shabakada bulshada si ad uga faa'iidaysato.
Baro Dheeri: Saldhigyada Intarneedka
Hagaha ku tusaaya sida loo badqabo markaad adeegsanayso intarneedka.
Markaad Wax Badan ogaato, Badqabkaagu Waa Kordhi Karaa
Ama u adeegso intarneedka shaqo, dugsi, ama madadaalo, waxaa muhim ah inaad xogtaada iyo tan qoyskaaga badbaadiso. Halkaan, waxaad ka heli doontaan casharro waxtara, tibaaxo iyo casharro dhammaan loo abaabulay adiga inay kaa caawiyaan sidii aad ku dhex maxi lahayd Intarneedka si badqab leh.
ku kalsoonow wararka iyo xogta caafimaadka ee baraha intarneedka si aad meel ugu ogaato ilaha la isku hallayn karo oo aad uga dheeraato wararka marinhabaabiska ama xogaha qaldan.
Sida Xilkasnimada leh oo loo adeegsado Intarneedka
Waxyaalaha ay tahay inaad maskaxda ku hayso inta aad xulitaanka ku jirto.
Wax kastoo aad u baahan tahay si aad u sugto badqabka Onlaynka qoyskaaga.
Baro sida loo garto been-abuurrada wax-dhimaalka leh kahor intaysan adiga ku saamayn.
Wax Badan ka Baro: Amniga iyo Badqabka Onlaynka
Ilaha waxbarashada, maalgelinta, xirfadda iyo adeegyada bulshada.
Eeg sida Intarneedku wax u caawin karo
Intarneedka waa il ku wanaagsan siiwadashada waxbarashada, kaalmaynta goobitaannada shaqada, dabosocoshada waxtarradaada, iyo haqabtirka nolosha. Arag sida ilahaani kuu caawin karaan.
Waa Inaad Heshaa Dugsiyeed
Hey'ad qarameed ka caawiya dadka dhallinyarada dugsiga sare, kulliyadda, marinno beddeli kara iyo shaqooyinka nolol-mihneeda bilaw ah, yadoo loo maraayo iskudhaf gaara oo ka kooban waxyaabo tireed xiiso leh, dheelid, iyo taageero qof ahaaneed iyo hawlgelin.
Hagitaanka wax walba laga bilaabo u-gooshka shaqo ugaarsiga ilaa maalinta ugu horreysa oo aad diyaar-garow u dhaqaaqday.
Wax Badan ka Baro: sidii aad waxyaalaha u qaban lahayd
Naftaada la loollan
Hel Casharro qofeed, waxbarashada onlaynka iyo siiwadista waxbarashada oo aagag ka la jaada leh. Waxa aad qaban kartaa xad ma laha.
Af cusub kubarashada onlaynka
Fan iyo Naqshad
Horudhaca naqshad garaafeedka, sharraxaad tireedka iyo sawiridda.
Ilaha siiwadashada waxbarashadaada ee onlaynka ama qof ahaan ee loogu talagalay da'ahoo iyo danahoo dhan.
Wax Badan ka Baro: Sida Xirfadaha Cusub loo Dhiso